यी हुन् बार्सिलोनामा सर्वाधिक कमाउने पाँच खेलाडीहरु
चैत ११ , काठमाडौं । बार्सिलोना स्पेनिस फुटबलको सबैभन्दा सफल क्लब हो । बार्सिलोनाले क्लब फुटबलका प्राय सबै उपाधिहरु चुमिसकेको छ । बार्सिलोनाले २५ पटक स्पेनिस लालिगा, ३० कोपा डेल रे, १३ सुपर कप, ५ च्याम्पियन्स लिग, ५ युईएफए सुपर कप र ३ पटक फिफा क्लब विश्वकप जिति सकेको छ । अन्य घरेलु कप तथा युरोपियन कपहरु समेत बार्सिलोनाले हात पारिसकेको छ ।
स्पेन र युरोपमै सफल क्लब बार्सिलोनासँग विश्वस्तरीय खेलाडीहरु अनुबन्ध गर्ने क्षमता छ । त्यसैले पछिल्लो पाँच सिजन यता बार्सिलोनाले खेलाडीका लागि हरेक साता ७३१.४७ मिलियन पाउण्ड बढी रकम खर्च गर्दै आईरहेको छ । पछिल्लो समय बार्सिलोना लालिगाको सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने टिममा पर्छ । जसका कारण विश्वका महंगा खेलाडीहरु ठुलो रकममा बार्सिलोनासंग आबद्ध छन् ।
बार्सिलोनामा सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने खेलाडी धेरै छन् । जसमध्ये मुख्य पाँच खेलाको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
बार्सिलोनामा सर्वाधिक पारिश्रमिक पाउने पाँच खेलाडी हरु:
५) सर्जियो बुस्केट
स्पेन राष्ट्रिय टोलीका डिफेन्डीङ मिडफिल्डर सर्जियो बुस्केट बार्सिलोनाका धेरै पुरानो खेलाडी हुन् । उनी सन् २००५ बाट बार्सिलोनाको जुनियर टिममा आबद्ध भएका थिए । बुस्केट सन् २००८ बाट बार्सिलोनाको सिनियर टिमबाट खेल्न थालेका हुन् । बुस्केटले बार्सिलोनामा हालसम्म ३ सय ३८ खेल खेल्दै सात गोल गरि सकेका छन् ।
निकै नै अनुभवी खेलाडीको रुपमा रहेका उनले बार्सिलोनाबाट हरेक साता १ सय ८० मिलियन पाउण्ड पारिश्रमिक लिन्छन् ।
४) उसमान डेम्बेले
फ्रान्सेली स्टार खेलाडी उसमान डेम्बेले सन् २०१७ मा ब्रुसिया डर्टमण्डबाट बार्सिलोनामा आएका थिए । डेम्बेले हाल बार्सिलोनाका लागि निकै महत्पूर्ण खेलाडी हुन् । बार्सिलोनाले आफ्ना पूर्वस्टार खेलाडी नेयमारको स्थान पूर्ति गर्न उनलाई बार्सिलोनामा अुनबन्धन गरेको थियो ।
बार्सिलोनामा करीब एक वर्षभन्दा धेरै समय बिताइसकेका डेम्बेलेले जम्मा ४१ खेलमा ११ गोल गरेका छन् । डेम्बेलेले हाल बार्सिलोनाबाट हरेक साता २ सय २० पाउण्ड डलर पारिश्रमिक लिन्छन् ।
३. फिलिपे कौटिन्हो
ब्राजिलियन मिडफिल्डर कौटिन्होले बार्सिलोनामा सर्वाधिक पारिश्रमिक पाउने तेस्रा खेलाडी हुन् । उनले बार्सिलोनामा हरेक साता २ सय ४० मिलियन पाउण्ड पारिश्रमिक लिन्छन् । कौटिन्होले आफ्नो व्यावसायिक फुटबल जीवनको सुरुवात इटालियन क्लब इन्टर मिलानबाट गरेका थिए । उनी सन् २०१३ मा इंग्लिश क्लब लिभरपुलमा अनुबन्धित भएका थिए । लिभरपुल आएपछी कौटिन्हो प्रिमियर लिगका उत्कृष्ट मिडफिल्डर सावित भए ।
कौटिन्होको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शनबाट प्रभावित भएर बार्सिलोनाले उनलाई गत सिजनको सुरुवातमा १ सय ४२ मिलियन पाउण्डमा क्लबमा अनुबन्ध गरेको हो । कौटिन्होले बार्सिलोनाबाट ४४ खेल खेल्दै १२ गोल गरिसकेका छन् ।
२. लुइस स्वारेज
उरुग्वेका फरवार्ड लुइस स्वारेज बार्सिलोनामा धेरै पारिश्रमिक पाउने दोस्रो खेलाडी हुन् । उनले बार्सिलोनामा हरेक साता २ सय ९० मिलियन पाउण्ड पारिश्रमिक लिन्छन् । स्वारेज सन् २०१४ मा इंग्लिश क्लब लिभरपुलबाट ७५ मिलियन पाउण्डमा बार्सिलोना आएका थिए । विश्वकै उत्कृष्ट स्ट्राइकरको सूचीमा पर्ने स्वारेजले बार्सिलोनाबाट १ सय ५७ खेल खेल्दै १ सय २८ गोल गरिसकेका छन् ।
स्वारेजले बार्सिलोनाबाट तीन पटक लालिगा, चार कोपा डेल रे र एक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितिसकेका छन् । स्वारेज सन् २०१५-०१६ का युरोपियन गोल्डेन बुट विजेता र तीन वर्ष यताकै लालिगामा धेरै असिस्ट गर्ने खेलाडी पनि हुन् ।
स्वारेज सन् २०१५-२०१६ को लालिगा प्लेयर अफ दी सिजन बनेका थिए ।
१) लियोनल मेस्सी
अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी आफ्नो पुस्ताकै सर्वकालिन महान खेलाडीमा गनिन्छन् । बार्सिलोनाबाटै फुटबल करियर सुरु गरेका मेस्सी सर्वाधिक पारिश्रमिक पाउने खेलाडीको सूचीको पहिलो स्थानमा पर्छन ।
बार्सिलोनाका कप्तान समेत रहेका मेस्सीले हरेक साता ५०० मिलियन पाउण्ड पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन् । मेस्सी बार्सिलोनाका मात्र नभई विश्व फुटबलकै सर्वाधिक पारिश्रमिक पाउने खेलाडीमा पर्दछन् ।
मेस्सी अहिले बार्सिलोनाको एक मुख्य खेलाडीका रुपमा रहेका छन् । पाँच पटकका बालोन डि’ओर विजेता मेस्सी लालिगाका स्वर्धिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् । मेस्सीले सन् २०१२ मा एकै सिजन ९१ गोल गर्दै गिनीज बुकमा नाम लेखाएका थिए ।